Fankalazana ny fetin’ny Asa – Sénat de Madagascar
May 2, 2019 Michel Hervey ANDRIANIRINA
Nandray anjara tamin’ny fankalazana ny fetin’ny asa izay nokarakarain’ny Sendikan’ny Mpiasa Malagasy tamin’ity taona 2019 ity ny mpiasan’ny Antenimierandoholona. Niainga avy eto amin’ny Lapan’Anosikely ny filaharana ka namonjy ireo Sendikan’ny mpiasa Malagasy miankina na tsy miankina amin’ny Fanjakana teny Mahamasina ary nitanjozotra hatrany amin’ny kianjan’ny Demokrasia Ambohijatovo izany filaharana izany.
“Antenimierandoholona tsy fahavalon’ny Fampandrosoana sy ny fitsinjaram-pahefana” io no lohahevitra noentin’ny mpiasan’ny Antenimierandoholona tamin’io fotoana io.
Niatomboka tamin’ny “Zumba” ny hetsika fanentanana ary narahina kabary nifandiambiasan’ireo Filohan’ny Sendika maro samy hafa izay tonga tao naneho ny hetahetany sy ny olana sedrain’izy ireo amin’ny toeram-piasany tsirairay avy , ary na dia tsy nandray fitenenana aza ny solotenan’ny Sendika MIzaka tenan’ny MPIasan’ny Antenimierandoholona Madagasikara na ny SE.MI.MPI.AD.M dia nahazo fankasitrahana hatrany teny amin’ny lalana izay nolalovana. Marihina fa ny Lohahevitra nentin’ny Sendikan’ny Mpiasa Malagasy hankalazana ny fetin’ny asa tamin’ity taona 2019 ity dia “Fari-piainana misongadina, mari-pahaizana mitovy, mari-karama mitovy”.
Niavaka tanteraka ny mpiasan’ny Antenimierandoholona tamin’ny fanamiana mainty izay nanaovany ho fanamarihana ny maha mainty molaly azy ireo eo anivon’ity Andrimpanjakana faharoa ity.